Keeniyaa Marsabiit: Daangaa Itoophiyaafi Keeniyaatti namootni koraaf bahan 11 ajjeefaman - BBC News Afaan Oromoo
Keeniyaa Marsabiit: Daangaa Itoophiyaafi Keeniyaatti namootni koraaf bahan 11 ajjeefaman
Haleellaa naannoo daangaa Keeniyaafi Itoophiyaa naannoo Marsabiit keessatti Wiixata darbe raawwateen namootni 11 ajjeefaman.
Miidiyaaleen Keeniyaa ajjeechaa kana kan raawwatan qaamolee nageenyaa Itoophiyaati jechuun gabaasaa jiraatanis Bulchaan Kaawuntii Marsabiit Aabba Alii Muhaammud Mahaammad dhara jedhan.
Akka Bulchaan kun BBC Afaan Oromotti himaniin milishoonni Itoophiyaa ajjechaa kana hin raawwanne. Mootummaan Itoophiyaa Keeniyaa waliin nageenya akka fedhu ibsaafi hojjechaa waan jiruuf kana hin raawwanne jedhan.
Kanaan durallee Fifinneetti kora nageenyaa waliin teenyee mariyachaa waan turreef akkaataa nagaa cimsun irratti guddoo waliin hojjenne.
"Ajjeechaa kana Itoophiyaatu raawwate kan jedhu dhara. Itoophiyaafi Keeniyaan akka dansaa harkaa walqabdi. Nuti waliif finna. Wanti dharaa finnummaa keenya nu jalaa hin booressiin jennee dhaammanna."
Gaazexessaa Qaasim Waaqoo ammoo akka BBCtti himetti bakki haleellichi raawwate 200km Marsabiit irraa bakka fagaatutti.
Namoonni ajjeefaman kora nageenyaaf waamamanii osoo deemaa jiranii marsamuun ajjeefamuu isaanii Komishinii dhimma nageenyaa naannoo Marsabiit Gilber Kitiyo wabeeffachuun BBCtti hime.
Qaamni nageenyaa Keeniyaa naannichaa akka ibsetti korri nageenyaa jaarroleen waamaman beekamtii isaaniin ala akka tahe ibsaniiru.
Dabalataan qaamni nageenyaa naannoo Marsabiit koricha keessatti nuyillee hirmaachuu qabna ture maaliif nutti hin himne jechuun ammalee akka gaaffii qaban himaa jiru jedha Qaasim.
Kanaaf eenyu akka haleellaa kana dhaqqabsiise qorachaa jirra jechuu isaaniiti BBCtti kan hime.
Kora kana irratti akkamitti namootni shan qofa hirmaatan kan jedhus gaaffii akka tahee fi dabalataan korichi maaliif bakka nageenyi amansiisaan jiruu fi qaamni nageenyaa bobba'etti hin gaggeeffamne? kan jedhu gaaffii qaamni nageenyaa Keeniyaa naannichaa qorachaa jiru tahuu hima.
Qaasim akka Bulchaa ganda naannoo haleellaan raawwate jedhamee Sanaa Obbo Maammoo irraa odeeffadhe jedhutti, jaarroleen Itoophiyaa guyyaa lama dura 'koottaa kora nagaa waliin gaggeessina' jechuun odeeffannoo dabarsanii ture.
Kana jechuun ammoo kora kanaaf jaarroleen biyyoota lamaanii qophii tahu agarsiisa jedha. Haa tahu malee dhimmi nageenyaa naannoo Marsabiit waa'ee korichaa hin beeknu jedha.
Namootni ajjeefaman kanneen korichaaf bahanii fi namoota kaan saawwan tikfachaa turan bakkicha turan tahuu dhimma nageenyaa Marsabiit irraa odeeffachuu dubbata Qaasim.
'Daangaatu adda nu baase malee nuyi saba tokko'
Biyyoota 'atileetiksii qofaa irratti wal dorgoman'
Imbaasiin Itoophiyaa lammiileef cidha qopheesse
Haleellicha humna nageenyaa Itoophiyaatu raawwate jedhamee odeeffamus dhimmi nageenyaa Marsabiit garuu qaama kana jechuu hin dandeenyu qorannoo irra jechuun ibsan jedhe.
Mootummaan naannichaa sirna awwaalchaa kaleessa raawwate irratti gochicha balaaleffachuun waktii soomanaa waan taheef, jaarroleen wal waaman wal arguun marii barbaadan gaggeessanii adda bahuu qabu ture jechuun ibsuu Qaasim BBCtti hime.
Qaasim gama qaama nageenyaa daangaa Itoophiyaa jiru irraa akkan odeeffannoo argadhetti qaama gochaa kana qaama raawwate qorachaa jiru jedha.
Naannoo daangaa biyyoota lamaaniitii yeroo dhiyoo illee hariiroo uummata naannichaa cimsuuf marii gaggeessa turuu dubbata.
Dabalataan nageenya naannichaa tasgabbessuuf jecha dhimi nageenyaa Marsabiit qawwee 1200 ol tahu uummata irraa funaananii ture jedhe.
Haa tahu malee gandoota gar tokko irraa funaananii kaan irratti waan dhiisaniif bulchitootni naannichaa qaama nageenyaa Marsabiit qeeqaa turuu Qaasim BBCtti himeera.
Gama mootummaa Itoophiyaan eenyu haleellicha akka raawwate adda baasuuf Ambaassaadara Itoophiyaa Keeniyaa Naayiroobii jiran Mallas Alam gaafannus hanga ammaatti odeeffannoo guutuu hin arganne garuu hordofaa jirra jedhan.
Ambaasadar Mallas dhiyeenya bulchitoota naannoo Marsabiitii fi Mandheeraa dabalatee bulchitoota naannolee biroo waliin dhimma hariiroo hawwaasa daangaa irraa ilaalchisee waajjira isaaniitii marii gaggeessanii ture.
'Daangaatu adda nu baase malee nuyi saba tokko' Oromoota Keeniyaa
3 Caamsa 2019
Imbaasii Itoophiyaa Keeniyaa jiru: 'Mirgi lammiilee Itoophiyaa Keeniyaa jirani akka kabajamu hojjenna'
19 Elba 2019
Gandi Keeniyaa Kaabaa tokko gaalonni 100 takkaatti jalaa dhuman gaddatti jirti
Imbaasiin Itoophiyaa Naayiroobii jiru lammiileef cidha qopheesse
30 Elba 2019